पैसाका लागि नक्कली बाबु छोरी बनेर नागरिकता ! – Taja Khawar
पैसाका लागि नक्कली बाबु छोरी बनेर नागरिकता !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १५, २०७८ समय: ०:३८:०२
facebook sharing button 221messenger sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonprint sharing button
काठमाडौ । बाबु छोरीको नाता पवित्र मानिन्छ । तर कतिपय भने पैसाको लोभमा यस्तो नातालाई नै बदनाम गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये पर्साका धुरुप प्रसाद पटेल पनि पर्छन् । उनले भारतीय एक नागरिकलाई आफ्नी छोरी भनेर नेपाल सरकारलाई नै झुक्याइदिएका छन् । छोरी बनाएर उनले एक युवतीलाई नागरीकताको प्रमाणपत्र समेत दिलाएपछि उनको करतुत बाहिरिएको हो ।
Last Updated on: July 30th, 2021 at 12:38 am